हामीले पनि रिक्त दरबन्दी नै पूरा गर्न लागेका हौ
० तपाईंहरुले नेपाली सेनाको सैन्य भर्नासागै जनमुक्ति सेनामा पनि भर्ना आहृवान गर्नु भएको छ, यसको कारण बताइदिनुस् न ?
० नेपाली सेनाले थप दरबन्दीमा होइन, खाली भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न लागेको भनिरहेको छ, तपाईंहरुले पनि रिक्त संख्या पूरा गर्न खोज्नु भएको हो ?
हामीले पनि रिक्त दरबन्दी नै पूरा गर्न लागेका हौ । नेपाली सेनाले शान्तिप्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडिको पन्चानब्बे हजारको संख्यामा पूर्ति गर्दैछ । हामी शान्तिप्रक्रियामा आउनुभन्दा अगाडि जनमुक्ति सेनाको संख्या पैातीस हजार थियो । त्यो पैातीस हजारबाट राजनीतिकरुपमा बाहिर जान चाहने साथीहरुलाई छूट दियौा । पछिल्लो चरणमा हामी क्याम्पमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिले दर्ता प्रक्रियामा जनमुक्ति सेनाको संख्या ३१ हजार तीन सय पन्ध्रजना हो । त्यो संख्यालाई अनमिनले दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उन्नाइस हजार छ सय चारमा झारिदियो । तर, अहिलेको उन्नाइस हजार चार सय छबाट समेत जनमुक्ति सेनाको संख्या केही घटेको छ । त्यसलाई पूर्ति गर्छौं । लक्ष्य हाम्रो ३१ हजार तीन सय पन्ध्र पुर्‍याउने नै हुन्छ ।
० रक्षामन्त्रीले त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि जनमुक्ति सेनामा भर्ना रोक्ने बताएकी छिन् नि ?
० दुवै सेनाबीच यसरी विवाद चर्कंदै जाने हो भने सेना समायोजनमा गम्भीर असर पर्दैन र ?
० अब प्रसङ्ग बदलौं, व्यवस्थापिका संसद्मा चारचार पटक निर्वाचन हुादासमेत मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन सकेन, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
० तपाईंहरुले प्रभुको इशारामा चल्ने कठ्पुतली सरकार भनेर विगतदेखि भन्दै आउनुभएको थियो, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निर्वाचनले निकास नपाउनुमा पनि त्यसैको निरन्तरता हो ?
० तपाईंहरुकै एक सभासद्लाई भारतीय दूतावासबाट धम्की दिएको सार्वजनिक भएको छ, यस सन्दर्भमा पार्टीले कस्तो कदम चाल्छ ?
० जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर कालिबहादुर खामको विषयमा उठेका विवाद’bout केही बताइदिनुस् न ?
० यतिबेला जनमुक्तिसेना, वाइसिएललगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्तामाथि सांघातिक हमला बढेको छ, यसमा पार्टीले अडानका साथ काम गरेको पाइए न नि ?
० तपाईंहरुलाई घेराबन्दीमा पार्न सबै दलहरु एकजुट हुादैछन् यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधान त आकशको फल हुने भयो होइन ?
० अन्त्यमा क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकमार्फत् आमजनसमुदायलाई थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?